Ny tsiambaratelona��I Madagasikara: Ny fahitana��I Eris Rabedaoro azy – fanilo
Ny mpikaroka mpanoratra, Eris Rabedaoro, indray no vahinina��ny hetsika a�?Tafa Harivaa�? izay fanaona��ny fikambanana Faribolana fanilo, isaky ny alarobia voalohana��ny volana etsy amina��ny Trass Tsiadana ny alarobia 6 septambra 2017 teo. Ny lohahevitra hoe a�?Madagasikara sy ny tsiambaratelonya�? moa no novelabelariny tamina��io takariva io. Nataony niendrika angano ny fanazavana satria ao anatina��ny teny hoe angano dia ahitana ny fototeny hoe a�?Hanoa�?, izay midika fa ny angano dia natao ho saintsainina sy ho tsakotsakoina. 3.000.000 taona lasa, hono, izay dia nisy andiana��olona avy any amina��ny planeta Venus tonga teto nanorina tontolo tsy hita maso antsoina hoe Agartha. Samy manana ny fitantarany mikasika izany, hoy ny tenany, izao tontolo izao fa ny ankamaroana��ireo tahirinkevitra dia milaza fa any amina��ny tany efitra��i Gourbit, izany hoe, tao ambanina��io tany io no nisy ana��i Agartha tany aloha tany. Fa taty amina��ny taona 1991 kosa dia nafindra ao ambanina��i Madagasikara io tontolo tsy hita maso io. Misy varavarana misokatra, hono, ao ambanina��ny tany ao idirana sambon-danitra ahafahana mankao ary 5 na 7 taona izay no lasa nisiana fivoriana farany tao.
Efa nisy malagasy nivory
Malagasy nivory tany, raha ny nambarany, ny filohana��ny Trano koltoraly teo aloha, Norbert Randriamahandry, izay mahay tenim-pirenena 25. Voarakitra anaty boky antsoina hoe Kundalini avokoa izay zava-nitranga tany ary hita ao fa ity filoha teo aloha ity dia nanatrika ny fahaterahana��ny lehibena��ny Agartha, Sanat Kumara na i Andrianafivaratra izay midika hoe Andriamanitry ny afo. Nanatrika ny fanamasinana ny sainam-pirenena malagasy koa, hono, izy ny taona 1991.
Hafa ny endriky ny saina malagasy
Araka ny tokony ho izy, hono, dia ahitana kintana enin-drantsana ny saina malagasy. Izany hoe, ahitana telozoro mitsangana sy mihohoka. Miloko fotsy ny atina��ilay kintana fa mena kosa ny manodidina azy. Midika io fa mifanandrify amina��ny ventana alakaosy ny vintana��i Madagasikara satria liana amina��ny resaka fivavahana, araka ny filazana hoe a�?Ny fanahy no olonaa�?. Ny alakaosy koa dia vintana��afo ary io ilay telozoro manondro lanitra. Antananarivo kosa, hoy izy, dia mifanandrify amina��ny vintana Alohotsy satria liana amina��ny tontolo tsy hita maso. Eto no be doany indrindra ary mitondra ny ventana rano kosa ny alohotsy. Io ilay telozoro manondro tany. Mifamono kosa ny vintana alakaosy sy alohotsy satria afo sy rano. Ny loko fotsy dia manondro ny vahoaka ary ny mena dia midika hoe miaina.
Ny tsiambaratelona��ny taona 2017
Inona loatra, hoy Eris Rabedaoro, no antony namindrana ana��i Agartha eto? Toy ny valinteny mikasika izay amina��ny ampahany ihany ny filazany fa raha ny fivoriana tany tamina��ny 5 na 7 taona lasa dia nahafantarana fa atsy ho atsy dia handroso be i Madagasikara saingy ny fanontaniana napetraka, hono, dia hoe mbola hitondra eto ve ny Gasy? Iaraha-mahita, hoy izy, fa maka ny toerany eto amina��izao fotoana izao ny vahiny ka mila mandray fepetra isika fa tara loatra raha aoriana��ity 2017 ity. Antony io, hoy izy, nikarakarana ny Volambita izay hatao eny Analakely ny alina��ny 22 septambra izao. Io no taombaovao nahitana��ny rehetra marimaritra satria lohataona, raha toa ka samy manana ny fomba fanisany ny Alahamady ireo foko mahatratra 12 isa mankalaza ny taombaovaony.
gynectrol uk sustanol 300
Ny mpikaroka mpanoratra, Eris Rabedaoro, indray no vahinina��ny hetsika a�?Tafa Harivaa�? izay fanaona��ny fikambanana Faribolana fanilo, isaky ny alarobia voalohana��ny volana etsy amina��ny Trass Tsiadana ny alarobia 6 septambra 2017 teo. Ny lohahevitra hoe a�?Madagasikara sy ny tsiambaratelonya�? moa no novelabelariny tamina��io takariva io. Nataony niendrika angano ny fanazavana satria ao anatina��ny teny hoe angano […]